VaTsigiri veZanu-PF Votora Munda weNzimbe weTongaat Hullet neChisimba
HARARE — Vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZanu-PF vanosvika mazana maviri avo vakanga vapiwa matsamba okuti vachapiwa minda yenzimbe kuChiredzi vari kuda kuti kambani yeTongaat Hullet ivharwe vachiipomera mhosva yekuputsa chirangano chekuvapa minda yenzimbe.
Kambani yeTongaat Hullet inonzi yakavimbisa vanhu ava kuti ichagadzira nzvimbo yakakura mahectare zvuru zvina kuti varimi vatsva ava vatange kurima nzimbe.
Asi zvinonzi kambani iyi yava kutsika madziro izvo zvoita kuti vamwe vafunge kuti inofanira kutorwa navanhu vatema pasi pemitemo yemunyika yokuti makambani ekunze anofanira kuendesa zvikamu makumi mashanu nechimwe kubva muzana zvema shares kuvatema.
Mutauriri we vatsigiri veZanu-PF ava VaAlbert Matambo vati hurumende inofanira kupindira panyaya iyi nokuchimbidza vasati vaisa mutemo mumaoko avo. Mumiriri weChiredzi East mudare reparamende VaAbraham Sithole vakatoti nechekare kambani iyi inofanira kuzadzisa chivimbiso chayo.
Makakatanwa pakambani yetsvigiri iyi anonzi ava kusanganisira zvikwata zviri kunetsana muZanu-PF. Chimwe chikwata chinonzi chinotungamira negurukota rezvekudzivirirwa kwenyika VaEmmerson Mnangangwa chimwe nemutevedzeri wemutungamiri wenyika Amai Joyce Mujuru.
Vaviri ava vanogara vachiramba kuti vanotungamira zvikwata zvakasiyana siyana. Ongororo yaitwa ne Studio 7 inoratidza kuti chikwata chaamai Mujuru hachidi kuti kambani iyi itorwe nevatema ukuwo chaVaMnangangwa chichida kuti kambani iyi ipiwe vatema.
Hatina kukwanisa kutaura naAmai Mujuru naVaMnangagwa kuti tinzwe divi ravo. Vakuru vebato reZanu-PF kuMasvingo vanotsigira chikwata cha Amai Mujuru vanosanganisira, vaimbova gavhuna weMasvingo VaDzikamai Mavhaire, gurukota rinoona nezve vashanyi munyika VaWalter Mzembi ne mwana we mushakabvu uye riri gamba renyika VaEddison Zvobgo, VaEddison Zvobgo Junior.
Ukuwo chikwata chaVaMnagangawa chinotsigirwa nevaimbovawo gavhuna we masvingo uye vari senator we Chivi-Mwenezi VaJosaya Hungwe, sachigaro we Zanu-PF kuMasvingo VaLovemore Matuke, pamwe nevaimbova mumiriri weGutu South mudare reparemende Amai Shuvai Mahofa.
Mukuru pakambani yeTongaat Hullet VaSydney Mutsambiwa vakaramba kutaura ne Studio 7 nezve nyaya iyi vachiti vanongo pindura mibvunzo yakanyorwa pasi chete.
Asi nyanzvi munyaya dzekurimwa kwenzimbe dzayambira kuti danho rekuda kubvuta kambani iyi kuzvisikira moto musiziso sezvo mamwe makambani akatorwamazhinji acho ave matongo.
Nyanzvi mukurimwa kwenzimbe VaTobias Musonzi vati danho iri richapinza nyika muna taisireva.
Gurukota rinona nezvekupiwa kwe hupfumi kuvatema VaSaviour Kasukuwere vakatotaura nechekare kuti kamabani yeTongaat Hullet inofanira kutorerwa matanho akasimba nehurumende.